▷ Waa maxay VRR? Sharaxaada Heerka Soo Celinta Isbeddelka ah - 【Isbarbardhigga】 2022
Waa maxay VRR? Heerarka dib-u-cusboonaysiinta ee isbeddelaya ayaa la sharraxay
Dad badan ayaa la yaaban waa maxay VRR? Waa mid ka mid ah ereyo badan oo la soo gaabiyay oo sabbaynaya muuqaalada TV-ga maalmahan., laakiin waxaad u baahan doontaa inaad fahanto si aad u hubiso in si buuxda laguugu wargaliyay markaad wax iibsanayso TV cusub, gaar ahaan haddii aad qorsheyneyso inaad u isticmaasho ciyaaraha Xbox Series X / Xbox Series S ama PS5.
VRR ama, waa maxay heerka dib u cusbooneysiinta doorsooma ee loo yaqaan, waa sifo muhiim ah si loo gaaro muuqaal siman oo aan farshaxan lahayn marka la ciyaarayo ciyaaraha, taas oo Waxay hubisaa muuqaal fiiqan ciyaaraha offline iyo tartanka.
Laakiin, Sidee ayay u shaqeysaa iyo intee in le'eg ayay ka duwan tahay runtii? Dhammaan jawaabaha waxaad ka heli doontaa hagaha hoose.
1 Waa maxay VRR?
1.1 Waa muuqaal naxdin leh.
2 VRR ka badan HDMI 2.1
3 Taageerada VRR: Waa maxay TV-yada, kaararka garaafyada iyo consoles-yada ay haystaan?
3.2 Kaararka sawirada
4 Dhibaatada Koobaad: Qiyaasta Qiyaasta Dib u Cusbooneysii
5 Dhibka Labaad: AV Receivers
6 Sug, ka warran FreeSync, V-Sync iyo G-Sync?
7 Dhibaatada VRR OLED
Waa maxay VRR?
Shaqada ugu weyn ee VRR waa in la baabi'iyo jeexjeexa shaashadda marka ciyaarta la ciyaarayo. Jeexdu waa nooc ka mid ah dhibaatada aragga, halkaas oo sawirka TV-gaagu uu ku dhex liiqayo dhexda ka hor inta aanu u sii socon sidii hore. Laakiin maxaa runtii halkan ka socda?
jeexjeexa shaashadda waxay dhacdaa marka cusboonaysiinta sawirka TV-gaagu aanu la socon karin xawaaraha Kaas oo kombuyuutarkaaga ama kaadhka garaafyada ee kombayutarkaagu uu u gudbinayo sawirro. Waxaad ku dhammaynaysaa sawir badhkiis shaashadda si aad u aragto, ie badhka sare ee shaashadda oo muujinaya hal sawir iyo badhka hoose ee xiga.
Tani waxay dhacdaa sababtoo ah telefishinadu isla markiiba ma cusbooneysiiyaan dhammaan sawirka shaashadda. Koontaroolaha kormeeruhu wuxuu si dhakhso ah u dhuftaa shaashadda, badanaa kor iyo hoos, isagoo cusbooneysiinaya xaaladda pixel kasta. Waxay u dhacdaa si degdeg ah si ay indhaheenna iyo maskaxdeenna u ogaadaan, ilaa ay sababto cillad arag ah.
Jeexdintu waxay noqotaa mid la dareemo marka, tusaale ahaan, aad isticmaalayso TV 60Hz ah iyo heerka jir ee ciyaartu wuxuu u dhexeeyaa 45fps ilaa 60fps. Tani waxay si gaar ah uga muuqataa ciyaaraha dhaqsaha badan sida ciyaaraha qofka koowaad. Si degdeg ah u rogo ciyaarta, farqiga u dhexeeya macluumaadka shaashadda wuxuu noqon karaa mid aad uga duwan hal sawir oo kale.
Waa muuqaal naxdin leh.
VRR waxay meesha ka saaraysaa tan iyadoo la jaanqaadaysa heerka soo kicinta ee shaashadda iyo tan soosaarka console-ka. Ma jeexjeexin, wax qabadna ma dhicin sababtoo ah console-ka ama PC-ga ayaa wada garaaca, maaha shaashadda.
Midkeenii Dambe Qaybta II (PS4) (Sumcada Sawirka: Sony / Naughty Dog)
VRR ka badan HDMI 2.1
Fikraddan cusbooneysiinta shaashadda si ay ula jaan qaado sawirada la soo rogay ma ahan wax cusub, laakiin tikniyoolajiyadda ayaa dhowaan soo hagaagtay oo noqotay mid aad loo heli karo.
VRR hadda waa qayb ka mid ah heerka HDMI 2.1, kaas oo sidoo kale ay taageerto eARC, waana muuqaal ka mid ah jiilka soo socda Xbox Series X, Series S iyo consoles-yada PS5.
Isku xidhka Frame-ka kaliya maaha taageerayaasha ciyaaraha PC, iyo VRR waxay taageertaa xallinta ilaa 4K iyo heerar heersare ah ilaa 120fps, kaas oo ah xadka hadda jira waxa ay soo saari karaan consoles-yadan ugu caansan iyo TV-yada.
VRR ee ka sarreeya HDMI 2.1 waa habayn muhiim ah oo habka, sababtoo ah ka hor waa inaan ku tiirsanaano G-Sync iyo FreeSync. Kuwani waa farsamooyin gaar ah oo ka yimid Nvidia iyo AMD, waxayna yimaadeen waqti dheer ka hor HDMI 2.1. Inta aad G-Sync ka heleyso LG OLED TV-yada, tusaale ahaan, kuma badna TV-yada caqliga leh sida VRR.
Taageerada VRR: Waa maxay TV-yada, kaararka garaafyada iyo consoles-yada ay haystaan?
Hagaag, hore ayaan u ognahay taas Sony iyo Microsoft consoles-kii ugu dambeeyay waxay taageeraan VRR. Laakiin maxaa kale oo ay qabataa?
Malaha yaab, Xbox One S iyo Xbox One X sidoo kale. Waxay adeegsadaan AMD FreeSync, maadaama ay leeyihiin soo-saareyaasha sawirada AMD, laakiin sidoo kale waa la cusboonaysiiyay si ay VRR uga taageerto HDMI.
Tech-savvy ayaa laga yaabaa inuu isweydiiyo sida ay taasi macquul ku tahay marka Xbox One X iyo One S aysan aheyn HDMI 2.1 consoles'ka.
Tani waa halka ay arrimuhu ka yara jahawareeraan. HDMI 2.1 ma aha hal halbeeg, laakiin waa ururinta tignoolajiyada. Waxay la mid tahay 5G arrinkan. Qaar ka mid ah qalabka HDMI 2.0 ayaa VRR ka taageera HDMI, laakiin xajmiga hoose ee HDMI 2.0 macnaheedu waa inuu ku shaqeeyaa ilaa 60Hz halkii uu ka ahaan lahaa 120Hz Xbox One X.
Kala qaybsanaantan HDMI sidoo kale waa sababta ay qaar ka mid ah TV-yada cusub ee HDMI 2.1 aysan taageerin VRR; looma soo gadan sababtoo ah waxa ay leedahay xidhiidhiyaha HDMI 2.1. Tani waxay noqon doontaa mid ka yaraada madax-xanuun dhamaadka 2021, marka VRR ee ka sarreeya HDMI ay u badan tahay inay noqoto muuqaal caadiga ah ee TV-yada dhexe iyo kuwa sare.
Laakiin maadaama tani ay tahay tile taageero hadda, Waa kan eega taxanayaasha TV-ga ugu caansan ee dhamaadka-sare iyo consoles/GPU-yada taageera VRR.
Taxanaha Xbox X: HDMI / FreeSync
Taxanaha Xbox S: HDMI / FreeSync
Beddelka Nintendo: N / A.
Nvidia RTX 3000 Taxanaha: HDMI / G-Sync
Nvidia RTX 2000 Taxanaha: HDMI / G-Sync
Nvidia GTX 1000 taxane: G-Sync (oo kaliya isku xiraha DisplayPort)
AMD Radeon RX 6000 taxane: HDMI / FreeSync
AMD Radeon RX 5000 taxane: HDMI / FreeSync
AMD Radeon RX 500 taxane ah: FreeSync
LG OLED CX / GX kala duwan: HDMI / FreeSync Premium / G-Sync
LG OLED BX kala duwan: HDMI / FreeSync Premium / G-Sync
Maxay tani noo sheegaysaa? Samsung-dhamaadka sare iyo LG TV-yada ayaa ilaa hadda ah kuwa ugu fiican marka ay timaado astaamaha console-ka soo socda.
Si kastaba ha noqotee, waxaa jira arrimo kale oo sii adkeeya.
LG CX OLED (2020) (Sumcada sawirka: LG)
Dhibaatada Koobaad: Qiyaasta Qiyaasta Dib u Cusbooneysii
TV kasta ama kormeere kasta oo ku habboon VRR wuxuu leeyahay hawlo kala duwan, noocyada kala duwan ee heerarka soo kicinta ee uu ku shaqayn karo marka la isticmaalayo VRR. Caadi ahaan waa wax la mid ah 40-120Hz, sida LG CX OLED cajiib ah.
Tani waxay ka dhigan tahay inaysan u shaqeyn doonin ciyaaraha mudnaanta siiya tayada muuqaalka marka loo eego heerka jir oo ujeedadoodu tahay waxqabadka 30fps. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira xal.
Qaar ka mid ah bandhigyada VRR waxay leeyihiin sifo loo yaqaan LFC (Magdhowga Heerka Joogtada Hoose). Tani waxay u oggolaanaysaa shaashaddu inay cusboonaysiiso laba jeer heerka xargaha la sameeyay. Markaa way isku mid yihiin, laakiin TV-gu wuxuu u shaqeeyaa laba jeer si adag.
Tani waa muhiim sababtoo ah haddii Xbox Series X iyo PS5 loo suuq geeyo sida "120fps" consoles, 30fps ciyaaraha waxay u badan tahay inay wali sii shaqeeyaan. Waa maxay sababtu? Iyaga oo higsanaya heer ka hooseeya, iyo laga yaabee xitaa xallinta-4K, horumariyayaashu waxay u isticmaali karaan wax badan oo ka mid ah awoodda console-ka ee iftiinka sare ee raajo-raadinta, texture, ama saamaynta hadhka. Waxay u badan tahay inay horumariyaan dhexgalka in ka badan heerka jir ee ciyaaraha tacaburka tartiib tartiib ah.
Dhibka Labaad: AV Receivers
Waxaan haynaa war xun. Waxa kale oo laga yaabaa inaad u baahato inaad cusboonaysiiso soo-dhoweeyahaaga tiyaatarka guriga haddii aad leedahay hab-samaynta dhawaqa dhaqameed ee agagaarka ah maadaama ay sidoo kale tahay inay taageerto VRR. Iyo ilaa aad haysato aqbale cusub mooyaane, taasi xaqiiqdii hadda xaalku maaha.
Nasiib wanaagse, xal ayaa jira.
Waxaad toos ugu xidhi kartaa kombuyutarkaaga ama qalabka ciyaarta si aad uhesho TV-gaaga waxaadna isticmaali kartaa wax soo saarka maqalka ee TV-ga ama HDMI ARC ama isku xira eARC si aad codka ugu dirto ridahaaga.
ARC iyo eARC ka dib waxay u beddelaan mid ka mid ah wax-soo-saarkaaga HDMI TV gaaga wax soo saar maqal ah.
eARC ( Kanaalka Soo Celinta Maqalka La Wanaajiyey) ayaa ka wanaagsan labada. Xiriirkeeda sare-bandwidth wuxuu u oggolaanayaa qaabab aad u sarreeya sida Dolby TrueHD iyo DTS-HD inay dhex maraan.
(Sumcada sawirka: LaComparacion)
Sug, ka warran FreeSync, V-Sync iyo G-Sync?
para si buuxda u faham sababta VRR ee ka sarreysa HDMI 2.1 ay tahay mid gaar ah, waa fikrad wanaagsan inaad dib u milicsato hormoodka farsamadan. Aan ku bilowno V-Sync, oo ah xalka asalka ah ee dhibaatada jeexjeexa sawirka.
V-Sync wuxuu wax ku rogaa isagoo ku ordaya GPU shaashadda shaashadda shaashadda, taas oo dhaqan ahaan ahaan lahayd 60Hz. GPU wuxuu ku dhuftaa bixinta gaarsiinta si uu ula mid noqdo awoodda shaashadda.
Jeexitaanka waa la xalliyaa, laakiin arrimaha la midka ah ee muuqaalka ayaa muuqda haddii xawaaraha wax-qabadku aanu la mid noqon karin heerka soo kicinta shaashadda. Waxaad arki doontaa dhibco halka sawir la mid ah la soo bandhigay laba jeer ama in ka badan oo isku xigta, taasoo keentay gariir ay sababto waxa kala badh ah (ama rubuc ka mid ah heerka jir).
Arrintaan waxaa lagu hagaajiyay Adaptive V-Sync, oo ay soo bandhigtay Nvidia 2012. Waxay si fudud u curyaamisaa V-sync marka heerka jirku ka hoos dhaco heerka soo-celinta kormeeraha.
Midkoodna ma ahayn mid ku habboon, taasoo horseeday soo bandhigida Nvidia G-Sync ee 2013 iyo AMD FreeSync ee 2015. Kuwani waxay aad ugu eg yihiin hirgelinta VRR ee HDMI 2.1, markaa shaashadu waxay bedeshaa dabeecadeeda halkii ay ka ahaan lahayd PC.
Dhibaatada VRR OLED
Hadda oo aanu ku siinnay aragti ku saabsan taariikhda tignoolajiyadan, waxaan u baahanahay inaan dib u qaadno si aan kuu siinno muuqaal farsamo oo badan waxa ka socda daaha gadaashiisa. Si uun VRR, G-Sync iyo FreeSync runtii ma beddelaan hab-dhaqanka shaashadda inta aad malaynayso.
Inta badan habdhaqanka shaashadda waxaa had iyo jeer lagu go'aamiyaa heerka ugu badnaan. Tusaale ahaan u soo qaado telefishan 120 Hz ah.
Waxaad cusbooneysiin kartaa sawirkaaga 120 jeer ilbiriqsikii, ama hal mar 8,3 millise seconds ama wax ka badan. Mid kasta oo u dhexaysa waa daaqad wakhti uu TV-gu sawiri karo, kuwanuna sidii hore ayay ahaanayaan iyada oo aan loo eegin heerka cusboonaysiinta ee VRR ay doonayso inay ku daydo.
Shaashadu waxay sugeysaa qaabdhismeedka inuu dhammaystiro ka dibna wuxuu dhigaa mid ka mid ah daaqadaha 8,3 ms.
Samsung Q80T QLED TV (2020) (Sumcada Sawirka: Samsung)
Ma jirto dhibaato weyn halkan oo ku saabsan TV-yada LCD, sababtoo ah sida ay u shaqeeyaan. Xaaladda pixels ee muraayadda LCD iyo iftiinka iftiimiya waa kuwo madaxbannaan. Shaashado LCD ah, oo ay ku jiraan Samsung QLEDs, waxay leeyihiin laydhka dhabarka ee LED kuwaas oo fadhiya xagga dambe ee pixels ama dhinacyada shaashadda.
TV-yada OLED waxay leeyihiin pixels iftiimiya iftiin waxayna tani u muuqataa inay saameynayso waxqabadkooda marka la isticmaalayo VRR. Waa kuwan qaar ka mid ah fikradaha qoraaga John Archer, badiyaa TechRadar, ee Forbes:
"Arrinta ugu weyn, iyo mid dhibaysa labadaba 2019 iyo 2020 LG OLED sets, waa in marka VRR la shido, sawirku wuxuu la kulmaa dhalaal / isbeddel gamma kaas oo ka dhigaya meelaha mugdiga ah ee ciyaaraha inay u muuqdaan kuwo madow. Waxaan nafteyda ku arkay dhowaan LG OLED48CX. »
Beddelidda qalooca gamma waxay noqon kartaa farsamo loo isticmaalo in lagu dhexdhexaadiyo dhalaalka shaashadda lagana ilaaliyo liidashada in VRR ay ku keeni karto noocyada guddiyada qaarkood.. Oh, iyo qaar ka mid ah milkiilayaasha LG OLED ayaa sidoo kale ka cawday flicker VRR la xiriira.
Waxa loola jeedaa? TV-ga ugu fiican ee OLED ee ciyaaraha VRR wali lama abuurin. Laakiin waad hubsan kartaa inay koorsada ku socoto.
Heshiisyada maanta ugu wanaagsan LG OLED TV
LG OLED OLED65C1-ALEXA - Smart TV 4K UHD 65 inch (164 cm), Sirdoonka Artificial, 100% HDR,...
Ilaaliyaha ishaada ayaa ku mahadsan in aad ka xorowday nalka buluuga ah ee HEV ee waxyeelada u leh indhahaaga; Xidhiidh la wanaajiyey oo leh 4xHDMI 2.1, 3xUSB 2.0, WiFi (802.11ac), Bluetooth V5.0, RJ45 LAN